shwezinu: မြလှိုင် ၏ ဘဝနေဝင်ချိန်, အပိုင်း (၂၂)
မြလှိုင် ၏ ဘဝနေဝင်ချိန်, အပိုင်း (၂၂)
ရေ၊ ရေ။ တစ်ဆင့်မှ တစ်ဆင့် လက်ဆင့်ကမ်းလာသော ရေဖြစ်သည်။ ရေပုလင်းထဲတွင် လက်သုံးလုံးမျှ ကျန်ရှိနေသောရေ။ ထိုအချိန်က အမှန်တကယ်သာ သောက်ရမည် ဆိုလျှင် ဤရေပုလင်းမျိူး သုံးလေးပုလင်း သည် အသာကလေး ကုန်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ယခု ကျွန်တော့်ထံသို့ ရောက်ရှိလာသည့်ရောမှာမူ လက်သုံးလုံးစာ မျှသာ။ ကျွန်တော်သည် အာစွတ်သည် ဆိုရုံမျှသာ တစ်ငုံငုံ ထားလိုက်ပြီး လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် ထို့နောက် တစ်ဆင့်ပြီးတစ် တဆင့်။ ကို ဆက်ဖတ်ရန် ....
စစ်မြေပြင် ဆိုသည်မှာ ဒါပဲဖြစ်သည်။ ဖောင်း၊ သေနတ်သံ တစ်ချက်။ ကွင်းပြန့်ကျယ်တွင် သေနတ်သံသည် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် မရှိလှပေ။ ကျွန်တော်သည် သေနတ်သံလာရာဆီသို့ စူးစမ်းကြည့်မိသည်။ ကျွန်တော် တို့အား ပစ်ခတ်ရန် အမိန့်ပေးခြင်း မဟုတ်သဖြင့် ကျွန်တော်တို့ထံမှ ပစ်ခတ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ကျွန်တော်ခေါင်း ထဲ၌ အတွေးတစ်ချက် ပေါ်လာသည်။ သို့သော် မတော်တဆ သေနတ်ထွက်သွားခြင်းလေလားဟု ထင်၍ ဒွိဟဖြစ်မိ သည်။ ကျွန်တော့်အတွေး မဆုံးသေးမီပင် ကောင်းကင်တစ်ခုလုံး ထိန်ထိန်မျှလင်းသွားသည်။ လသာခြင်း ထက် ပို၍လင်းသော အလင်းများ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ ဦးခေါင်းထက်တွင် ထိန်ထိန်သာ လျက်ရှိသော မီးကျည်တန်းများကို မြင်တွေ့လိုက်ရသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကျွန်တော်တို့နှင့် ကိုက် ၃၀၀ မျှ ဝေးသောနေရာတွင် ရွာကြီးတစ်ရွာရှိနေသည်။ အုန်းပင်များ၊ ကွမ်းသီးပင်များ၊ အိမ်ကြီးအ်ိမ်ကောင်းများ၊ ရဲဘော် တို့ နေရာယူ ဆရာလုပ်သူ၏ အော်ဟစ် အမိန့်ပေးလိုက်သံကြောင့် ကျွန်တော်သည် ကန်သင်းရိုးကို အကာအကွယ် ယူ၍ သေနတ်ကို ချိန်ထားလိုက်ပါသည်။
အချိန်သည် မိနစ်မဟုတ် စက္ကန့်မျှသာ ကြာမြင့်ပေလိမ့်မည်။ တစ်ဖက်ရန်သူဆီမှ ပစ်လွှတ်လိုက်သည့် ကျည်မီးပွားများသည် ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းပေါ်မှလည်ကောင်း၊ ဘေးဝဲယာ ဆီမှ လည်းကောင်း၊ ပြေးလွှားနေ ကြသည်။ ထိုအချိန်အထိ ကျွန်တော်တို့ဘက်မှ သေနတ်သံတစ်ချက် မထွက်သေး။ ပစ်ရန်လည်း အမိန့် မပေးသေး။ ကျွန်တော် သည် ကျည်ပစ်မောင်း ၌ လက်ပစ်သွင်းကာ ပစ်မိန့်ကို စောင့်နေမိသည်။
ကျွန်တော်သည် ဒူးညွှတ်၍ အပြေးတက်ကာ ရှေ့တွင်ရှိသော ကန်သင်းရိုးတွင်ဝပ်၍ နေရာယူလိုက် ပြန်သည်။ သို့သော် အခြားရဲဘော်များသည် တရစပ်ပြေးတက်နေသည်ကို တွေ့လိုက်သဖြင့် ဆက်၍ တက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော့်ဘေးမှ ရဲဘော်တစ်ယောက်၏ ညည်းညူသံတစ်ချက်ကို သဲ့သဲ့မျှ ကြားလိုက်မိသည်။ လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါ ရန်သူ့ထံမှ ကျည်သင့်ပြီကို သိလိုက်ပါသည်။
တိုက်ပွဲမှာ အလွန်ပြင်းထန်လှသည်။ တစ်ဘက်မှ ရန်သူများသည် အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ဘက်မှ တပ်ဖျက်၍ လက်နက်များ ကို ယူဆောင်လာခဲ့ကြသည့် လေ့ကျင့်သားရသော စစ်သားများ ဖြစ်ကြလေသည်။ ထိုထက် နယ်ချဲ့သမား တို့၏ သွေးခွဲမှုဖြင့် အထင်အမြင် လွဲမှားလျက်ရှိကြသည့် တိုင်းရင်းသားသွေးချင်း သားရင်း များ ဖြစ်သည့် ကရင်အမျိုးသားများဖြစ်ကြလေသည်။
ထိုတိုက်ပွဲတွင် ကျွန်တော်တို့ဘက်မှ အများအပြား ကျဆုံးခဲ့သလို တစ်ဖက်မှလည်း အများအပြား ကျဆုံး ကြလေ သည်။ သန်းခေါင်ယံက စတင်ခဲ့သော တိုက်ပွဲသည် ယခုအခါ မိုးစင်စင် လင်းခဲ့လေပြီ။ တိုက်ပွဲအရှိန် ကပြင်းထန်ဆဲ ပင်ရှိနေသည်။ ကျွန်တော်တို့တပ်များသည် ရှေ့သို့ပင် မတိုးနိုင်အောင် တစ်ဖက်မှ တရစပ် ပစ်ခတ်လျက် ရှိသည်။
နံနက်နေ သည် ခေါင်းပေါ်သို့ ရောက်လာပေပြီ။ ထိုမှ မွန်းတည့်၊ ထို့နောက် မွန်းလွဲ၊ ညနေစောင်းသို့ တိုင်ခဲ့ သည်။ ကျွန်တော် တို့တွင် အစာလည်းမစားရ၊ ရေလည်းမသောက်ကြရသဖြင့် အလွန်ပင်ပန်းလျက်ရှိနေကြ ပါသည်။ သို့သော် တစ်ဖက်မှ ပစ်ခတ်နေသော ကျည်ဆန်များကြား၌ ရွေ့လျားရန်ပင် ခဲယဉ်းလှသည့် အချိန်တွင် မည်သို့ မျှ မတတ်နိုင်ကြပေ။ ကျွန်တော်ပါဝင်သော တပ်စိတ်တွင် မောင်လှိုင်၊ ထွန်းမောင်တို့ ကျဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။
ညဉ့် ၁၀ နာရီခန့်တွင် တိုက်ပွဲ အရှိန်ပျော့်သွားသည်။ ကျွန်တော့်ထံသို့ တရုတ်ပဲမုန့်နှစ်ခုနှင့် ရေပုလင်းတစ် ပုလင်း ကို ရဲဘော်သောင်းအိ လာပေးပါသည်။ ကျွန်တော့် တစ်သက်တာတွင် ထိုနေ့ညက စားခဲ့ရသော တရုတ် ပဲမုန့်နှင့် ရေလောက် အရသာထူးသော အရသာကို ယခု အသက်အရွယ်ရောက်သည့်အထိ မခံစား မိသေးဟု ထင်မှတ် မိသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် တစ်ညနှင့် တစ်နေ့လုံးလုံး အစာရေစာမစားဘဲ နေခဲ့ ရပါသည် မဟုတ် ပါလော။
ထိုညက ကျွန်တော်တို့ မြေမွေ့ရာနှင့် ကန်သင်းကို ခေါင်းအုံးကာ တစ်ယောက်တလဲ အိပ်ခဲ့ကြရသည်။ တစ်ဖက် မှ ပစ်ခတ်သံစဲသောအချိန်သည် သန်းခေါင်ခန့်ဟု ထင်မိသည်။ အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းကြောင့် စိတ်လျှော့ လိုက်သောအခါ ချက်ချင်း အိပ်ပျော်သွားခဲ့လေသည်။ ၂ နာရီမျှ အိပ်လိုက်ရသည်ကို ၂ မိနစ်ခန့် ဟု ထင်လိုက်မိ သည်။ ကျွန်တော် အိပ်ဖန်စောင့်ရန် နိုးရာတွင် ကျွန်တော့် မျက်လုံးများ လုံးဝ ဖွင့်မရနိုင်ခြင်း ကြောင့် ရဲဘော်စိတ် ရှိသော ကိုသောင်းအိသည် မအိပ်တော့ဘဲ ကျွန်တော် အိပ်နေသည်ကို ခွင့်လွှတ်လိုက် လေသည်။
“မြလှိုင် သောင်းအိ ဆရာရွှေဂဲနဲ့ ကင်းထောက် လိုက်သွားရမယ်”
တပ်စုမှူး ဗိုလ်သိန်းအောင်၏ ထားဝယ်သံဝဲ၀ဲဖြင့် အမိန့်ပေးသံများကိုလည်း လက်ခံခဲ့ ဆရာရွှေဂဲနှင့်အတူ ရွာဆီ သို့ မိကျောင်းတွားသွား၍ တက်လာခဲ့ကြသည်။ တတောင်ဆစ်များ ပွန်းကုန်သည်။ ရင်ဘတ်များ ပဲ့ကုန်သည်။ ဤကဲ့သို့ တဆစ်ဆစ် ကိုက်ခဲခံရခြင်းထက် ပြေး၍ တက်သွားလိုက်ချင်သည်။ ကျွန်တော်သည် ရှေ့သို့ လှမ်းကြည့်မိလိုက်သည်။ ရှေ့ကိုက် ၂၀ ခန့်ရောက်နေပြီဖြစ်သော ဆရာရွှေဂဲကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော်သည် သူ့နောက်မှ ရဲော်သောင်းအိ၊ ကျွန်တော်သည်သာ နောက်ဆုံးမှ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည် စိတ်မရှည်နိုင်တော့ သဖြင့် မိကျောင်းတွား သွားနေရာမှ ကုန်း၍ ထလိုက်သည်။ ထိုအခါ ကျွန်တော့်နားထဲသို့ မအေနှမ ဆဲသံသည် ဆရာရွှေဂဲ၏ နှုတ်မှ အလုံးအရင်းဖြင့် စုပြုံကြီး ကျွန်တော့်နား ထဲသို့ ရောက်လာ ပါတော့သည်။
ကုသိုလ်ကံ ကောင်း သည်ဟု ဆိုရပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ ၃ ဦး ရွာထဲရောက်ရှိချိန်တွင် တစ်ရွာလုံး ပြောင်းရွှေ့ သွားကြသည် ကို တွေ့ရပါသည်။ ရွာတွင်း၌ လူသူများသာမဟုတ်။ ကျွဲနွားဝက် ရိက္ခာများကိုပါ စနစ်တကျ သယ်ဆောင် သွားခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မသယ်နိုင်သည့် စပါးများကို မီးရှို့ထားပစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက် တစ်နာရီကျော်မျှ ရွာအတွင်း လှည့်လည်စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးနောက် စိတ်ချရသော အခြေအနေ တွင် ရှိကြောင်း ဆတ်သားအဖြစ် ကျွန်တော့်ကို လွှတ်၍ အကြောင်းကြားစေပါ သည်။ ထိုညက ကျွန်တော်တို့ တတွေ ကြက်သားဟင်း၊ အုန်းရေများကို တ၀ စားသောက်ကြရလေသည်။
ကျွန်တော် ၏ စစ်သားဘ၀ ပထမဦးဆုံး တိုက်ပွဲပါတကား။
“သန်း ကိုယ်ကို ကတိဖျက်တယ်ဆိုပြီး မုန်းသွားပြီလား”
ချစ်သူသန်းသန်းက ခေါင်းခါပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ဖျာပုံသို့ ပြန်ရောက်လျှင်ရောက်ချင်း သန်းသန်းထံ စာရေး အကြောင်းကြား ခဲ့သည်။ ချစ်သူထံသို့ အကျိုးအကြောင်းပြောမပြရဘဲ တိတ်တဆိတ် စစ်ထွက်ခဲ့ရသည်ကို ရှင်းချက် များ တသီတတန်း ရေးပြပြီး လျှောက်လဲချက်ပေးလိုက်သည်။ ထိုစာနှင့် အတူ တွေ့ခွင့် လည်း တောင်း လိုက်သည်။
သည်တစ်ခါ တွင်တော့ ချစ်သူသန်းသန်းသည် သေရွာပြန် ချစ်သူအား အထူးအခွင့်အရေး တစ်ရပ်အဖြစ် သူ၏ အဒေါ်အိမ် အပေါ်ထပ်တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ချစ်သူနှင့် တွေ့ရပြန်တော့လည်း တမေ့တမော ချစ်သူ မျက်နှာ ကို ကြည့်နေမိသည်။ ချစ်သူ၏ ပါးပြင်ပေါ်သို့ အနမ်းမိုးများ ရာထောင်မက သွန်းဖြန်းပေး လိုက် မိသည်။
“ကဲ… ပြောစရာတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ဘာလဲပြော “
“ဟင်.. ဒါပဲ နောက်မတွေ့ဘူး“
“ရော်..လုပ်ပြီ၊ သန်းနဲ့တွေ့တော့ ပြောစရာတွေ မေ့ကုန်ပြီလေ“
ချစ်သူ၏ မျက်လုံးတွင် အပြုံးရိပ်တို့ ထင်လာသည်။ ထိုအခါ ကျွန်တော်ကဲ ပြန်သည် ။ ချစ်သူ ၏ နှုတ်ခမ်းအစုံသည် ပန်းအငုံသာ ဖြစ်ဘိမူ ကျွန်တော့် အနမ်းတွင် နွမ်းကြေသွားဖွယ် ဖြစ်ချိမ့်မည်။ တမေ့တမော သက်ဝင် လှုပ်ရှားနေသော အချိန်ကလေးများသည် အချစ်များဖြင့်သာ လူးခြယ်ထားသကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ စက္ကန့်ကလေး များ မိနစ်ကလေး များ၏ အစိတ်အပိုင်း များစွာထဲမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှပင် ကျယ်ပြောသော အတိုင်းအဆ မရှိ သမုဒ္ဒရာဟု ထင်မိသည်။
“သန်း…. ကိုယ်တို့နှစ်ယေက် အတူနေမယ်“
“ဒီတစ်ခါ ဘယ်ထွက်သွားဦးမှာလဲ ဟင် “
ချစ်သူ၏ အမေး တွင် သံသယ စကားဝှက် ပါလာလေသည်။ ထိုအခါ ကျွန်တော် ရင်မောရပြန်သည်။ အဖြေစကား အတွက် စကားလှစီခြယ် မပြနိုင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ တိကျ တိပသော အဖြေကို ကျွန်တော် မပေးနိုင်ခဲ့။ အမှန်က ကျွန်တော် သည် မိမိကိုယ်ကို မိမိမပိုင်သော စစ်သားတစ်ယောက် မဟုတ်ပါလား။
“ပြောလေ…. မောင် ဘယ်တော့ စစ်ထွက်ရဦးမှာလဲ“
“မသိသေဘူး သန်း၊ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါ သန်းကို ခိုးပြေးတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီပြီ၊ သန်းကို ကိုယ် မခွဲနိုင် ဘူး။ ကျွန်တော်၏ အရူးအမူးစကားရပ်ကို ချစ်သူက အလေးအနက်ထား စဉ်းစားပါသည်။ ကျွန်တော့် တွင် ဖမ်းစားနေသော အချစ်ရောဂါအတွက် သူပေးလာသော အကြောင်းပြချက်များသည် ကျွန်တော် ဘဝင်မကျသော် လည်း လက်ခံလာခဲ့ရသည်။
''မောင်ကိုယ်မောင် မပိုင်သေးတဲ့ဘဝမှာ ဘယ်လို မိန်းမယူလို့ ဖြစ်ပါ့မလဲ မောင်ရယ်၊ စစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် မောင် ဘာဆိုဘာမှ ပိုင်ဆိုင်နိုင်သူမဟုတ်ဘူးလေ၊ ဒါလဲ မောင်အသိပဲ မဟုတ်လား၊ ဒီကြားထဲ သန်း ကို မောင်ခိုးပြီးပြီ၊ ပေါင်းကြပါပြီတဲ့…၊ မောင် စစ်ထွက်သွားရင် မောင်ဇနီးမယား အနေနဲ့ ဘယ်လိုနေခဲ့ ရ မလဲ၊ မောင့်မိဘ အိမ်မှာလား၊ သန်းမိဘ အိမ်မှာလား…''
ချစ်သူ ၏ အမေးသည် မျက်စိတစ်စုံးကို ကြည့်၍ မေးသော အမေးမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဘဝတစ်သက်တာ ၏ အိမ်ထောင်ရေး ကို အခြေချရန်အတွက် မေးသင့်မေးထိုက်သော မေးခွန်းတစ်ရပ် ဖြစ်ခြေသည်။
ကျွန်တော် သည် သန်းသန်း၏ အမေးကွန်ယက်တွင် အဖြေရခက်နေသည်။ ကျွန်တော့်တွင် သန်းသန်း ကို ခိုးယူ ထွက်ပြေးရန်း ကြံစည်နေသည် ဆိုရ၌ပင် သေချာတိကျသော အစီအစဉ်ဟူ၍ သတ်သတ်မှတ် မှတ် မရှိခဲ့သည်မှာ အမှန်။ နောင်ခါလာ နောင်ခါဈေး၊ လးကြီးမိဘများသည် ကျွန်တော်တို့ လူငယ်များ ၏ ချစ်ရေးကြိုက်ရေး တွင် ခေတ္တမျှ မကျေမချမ်း ဖြစ်ကြမည်မှမပ ၊ နောက်သောအခါ ပြေပျောက်ကျေ နပ်လိမ့်မ်ာဟု ထင်နေမိ သည်။ ဤအချက်သည်ပင် ကျွန်တော်၏ ပျော့ကွက်ဟာကွက် ဖြစ်နေပါသည်။
လောလောဆယ်တော့ သန်းကို ကိုယ် ခိုးပြေးပြီး ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကို ကိုယ်တို့နှစ်ယောက် အတူတူ ''စဉ်းစား အဖြေရှာချင်တာပဲလေ... ''
'' မဟုတ်သေးဘူး မောင်ရယ် ခုအခါက တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အချိန် အခြေအနေက စဉ်းစား ခွင့် အများကြီး ပေးထားပေမယ့် လင်ရယ် မယားရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီးရင် စောစောက ရထားတဲ့ အချိန်အခါ အခြေအနေတွေ ဟာ ကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်၊ အဲဒီအခါမျိုးမှာ စဉ်းစားခြင်း အတွက် မဟုတ် တော့ဘဲ လုပ်ရမယ့် အချိန် ကိုသာ လုယူနေရတော့မှာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လင်မယား ဖြစ်နေကြပြီ မဟုတ်လား၊ ဒါပေမယ့် မောင့် သဘောပါ''
ချစ်သူသည် သူပြောသင့်သည် ထင်သော စကားရပ်များကို ကျွန်တော်အား ခြွင်းချန် ထိမ်ကွယ်ခြင်း မရှိ ဘဲ ပြောခဲ့ခေပြီ၊ ကျွန်တော့်ဘက်ကသာလျှင် ချစ်သူပြောသည့် စကားများထဲမှ အဖြေရှာရန် ဖြစ်သည်။ သန်းသန်း သည် ကျွန်တော် အခြေအနေမှန်ကို မသိခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
''သန်း ကို ကိုယ်အဖြေပေးမယ်''
သန်းသန်း သည် ကျွန်တော်အား ကလေးငယ်တစ်ဦးသဖွယ် ထင်မှတ်ဟန်ဖြင့် သက်ပြင်းတစ်ချက် ရှိုက်၍ ထုတ်လိုက် ပါသည်။ သန်းသန်း သည် အသက်အားဖြင့် ကျွန်တော်ထက် နှစ်နှစ်ခန့် ငယ်ရွယ်သော် လည်း တွေးဆနှိုင်းချိန်မှု အရာတွင်မူ လူကြီး တစ်ယောက်ျပမာ ဖြစ်ဘိသည်။ ကျွန်တော် သည် ကလေးဆိုး သဖွယ် ဇွတ်တွယ်ကပ်နားပူတိုက်ျနေသည့် ကြားမှပင် သန်းသန်းက ဖြစ်နိုင်ခြင်းနှင့် မ ဖြစ်နိုင်ခြင်းကို ခွဲ၍ရှင်းပြ ပါသည်။
''မြန်လွန်းလှတယ်လေ တစ်ပတ်လောက် စဉ်းစားပြီးမှ အဖြေထုတ်ကြရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ်''
''ကိုယ်... သန်း ကို နေ့တိုင်းတွေ့ချင်တယ်၊ တွေ့ကိုတွေ့ရမှ ဖြစ်မယ်.... ''
သန်းသန်းက ပြုံးသည်။ ကျွန်တော်လက်ကို ယုယစွာ ကိုင်တွယ်၍ နမ်းရှုပ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော် ဆံနုကလေး ကို သပ်ကာ မိခင်ပမာ နဖူးပြင်ပေါ်သို့ ဖွဖွကလေး အနမ်းဆုကလေးများ ခပ်နှိပ်ပေးသည်။ သန်းသန်း ၏ ကိုယ်သင်းနံ့သည် အချစ်ရူး ကျွန်တော်အတွေးများကို တည်ငြိမ်သွား စေပါသည်။
''နေ့တိုင်းတွေ့လို့ မဖြစ်နိ်ုင်ဘူး မောင်ရယ်၊ ဖေဖေတို့က ဒေါ်ဒေါ်လာခေါ်လို့သာ ထည့်လိုက်ရာ၊ တကယ်တော့ အိမ်လည်တာ ကို မကြိုက်ကြဘူး၊ နောက်ပြီး နေ့တိုင်းဆိုရင် ရိပ်မိသွားလိမ့်မယ်၊ ဒီတော့''
ကျွန်တော်သည် ချစ်သူပြောစကားများကို နားထောင်ရင်း တိုတောင်းသောအချိန်းများ ကုန်ဆုံးသွား မည်ကို စိုးရိမ် ပူပန်နေ မိသည်။ ချစ်သူအား မတွေ့မဖြစ်လောက်အောင် မရမက နားပူနားဆာ ပြုခဲ့ပြီး တကယ်တမ်းတွေ့ သည့်အခါ ဘာမျှ မည်မည်ရရ ပြောပြ နိုင်သည် မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သို့တစေ ချစ်သူများ ပီ ပီ တစ်ယောက် မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်နေရခြင်းသည်ပင် ပြီးပြည့်စုံသည်ဟု ထင်မှတ်ထားသူ ဖြစ်ပါ သည်။
ကျွန်တော်ဆိုသည်မှာ အရပ်က အောကြောလန်သော မောင်မောင်။
အနှီကဲ့သို့သော သူတစ်ယောက်နှင့် ဦးစစ်ရှိန်ကဲ့သို့သော လူတစ်ဦးတို့သည် သမီးယောက္ခမတော် ကြပြီ ဆိုငြားအံ့၊ အရပ်တကာတို့တွင် မိုးနှင့်မြေကြီး ထိသွားခြင်းဆိုသည့် သတင်းကို ကြားရခြင်း ထက် အံ့သြကြပေ လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ကျွန်တော်ဆိုသော မောင်မောင်သည် မိဘငွေကို ရေလို သုံးသည်။ နံနက်မှ အိမ်က ထွက်လျှင် ညဉ့်နက်မှ အိမ်သို့ ပြန်သည်။ တအုန်းအုန်း တဖုန်းဖုန်း ရိုက်သည့်ကြားမှ မဖြုံ။ ရိုက်ျသည့် သူက နောက်ဆုံး လက်မြှောက် အရှုံးပေးရသူ ဖြစ်သည်။ ဤမျှသာလော... မဟုတ်သေးပါ။ အရပ်ထဲတွင် လက်စွဲ တော် ကလေးတစ်အုပ်နှင့် မျောက်ရှုံးအောင် ဆော့သဖြင့် အများတကာ တို့၏ အော့နှလုံးနာ ဘွဲ့တံဆိပ် ရသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
ဦးစစ်ရှိန်သည် ကျွန်တော်အား ငယ်ငယ်က ဤသို့အကြောင်းများကိုလည်း သိသည်။ ကြီးလာသောအခါ သူ့ကဲ့သို့သော စီးပွားရေးသမား ပီပီသသ ဖြစ်မလာဘဲ နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦး ဖြစ်လာသည်ကိုလည်း သိသည်။ ထို့ပြင် ယခု တိုင်းပြည်ရေး အခြေအနေများသည် အမြစ်မှစ၍ ပြောင်း လဲသွားပြီးနောက် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် အဖြစ် ဖွဲ့စည်းလာသော တပ်ဖွဲ့တွင်းသို့ ဝင်ရောက် သွားခဲ့သော ရပ်ဆွေရပ်မျိုး ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်း ကျွန်တော် အကြောင်းများ အူမ၊ချေးခါး မကျန် သိထားသူ ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ကျွန်တော်အနေဖြင့်မူ ချစ်သူသန်းသန်း ကို မည်သို့မဆို ခိုးယူထွက် ပြေးရန် ဆုံးဖြတ်ထားဖြစ်ပါသည်။
မာဂုရက်ဆိုသော ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို အရူးအမူး ချစ်၍ ဘဝတစ်ခုလုံး ပျက်ပြုန်းအံ့ဆဲဆဲ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ မာဂရက်ကို ချစ်ခဲ့စဉ်က ကျွန်တော် စိတ်ထဲတွင် မာဂရက် တစ်ယောက်သာလျှင် ချစ်စရာ ခင်စရာ၊ တွယ်တာစရာ မြတ်နိုးစရာဟု ထင်မှတ်၍ တစိုက်မတ်မတ် အချစ်၏ သားကောင် အဖြစ် နှလုံးကြေအက် အသည်းကွဲ ဇာတ်လမ်းကြီး တစ်ခုကို ကပြခဲ့သည် မဟုတ်ပါလော။
ထိုရောအခါက မိခင်ျကြီးသည် သားမိုက်၏ ကုရာနတ္တိ ဆေးမရှိသည့် ဝေဒနာကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ကု စားပေးခဲ့ ရသည်။ ဒဏ်ရာကို ဆေးသိပ်၍ မှေးမှိတ်အိပ်စက် စေခဲ့သည် မဟုတ်ပါလော။ ထိုအချိန် ထို အခါများက ရက်ပေါင်း လပေါင်း များစွာ ကျော်လွန်ခဲ့သည်ကား မှန်သည်။ ထိုမှ တစ်ဖန်-
တစ်လင်ကွာ တစ်ခုလပ် ထား ဆိုသူ၏ ထဘီဖျားခတ်မှုကြောင့် နှာနှပ်ယူရမည့် ဘဝသို့ ရောက်ခဲ့ပြန် သည်။ ထိုအချိန်တုန်း ကလည်း လည်လွန်းသည့် ဘီး ချေးသင့်ခြင်းဟု အများတကာ၏ နှုတ်ဖျားမှ လက်မတင်ကလေး လွတ်မြောက် လာခဲ့ရသည် မဟုတ်ပါလေား။ ထိုအချိန်က ကျွန်တော် ဆိုသော မောင်မောင်၊ ဖနောင့်နှင့် တင်ပါး ပြေးနိုင်၍သာ လွတ်ခဲ့ရသည်။ ထိုထက် ဓာခုတ်လက်ရာလျှို၊ မိန်းမငတ် တပည့်ကျော် က မောင်မောင်လက်ကျန်ကို ဆက်လက်အမွေခံ၍သာ တော်ရော့သည် မဟုတ်ပါလား။
ကျွန်တော်သည် အရွယ်ကလေး မလောက်လေး မလောက်စား လူပျိုပေါက်ကလေး အရွယ်ကစ၍ မိန်းကလေး များနှင့် တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ မြန်မာစကားကို ပီပီသသ မပြော တတ်သည့် တရုတ်မ ကလေး ကျင်မိကိုပင် လက်ဟန်ခြေဟန်နှင့် ကြားပွဲစား စကားပြန်ထား၍ ရည်းစား ထားခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား။ ထို့နောက် ရန်ကုန်သို့ ပြန်ရောက်တော့လည်း စကောဈေးတစ်ခွင် ပြဲပြဲ စင်အောင် ခြေဖြန်း၍ အနှံ့ ပွေခဲ့ပြန်ရာ ခင်ခင် ဆိုသူ၏ တစ်ပတ်ရိုက်ခြင်းကို ခံလိုက်ရသောအခါမှ နောထိုင်သာ ရှိခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် ဖိနပ် သည် ဒေါ်စိန်စိန်၏ ညီမချော ခင်ကြည်ကြည်....။
ခင်ကြည်ကြည် ကိုမူ ကျွန်တော်မိဘများက မိန်းကလေး ပီသသည်ဟု ပြောုသည်။
သူ့ကိုတွေ့တော့ လည်း ကျွန်တော် အသည်းစွဲပြန်သည်။ လူကြီးများ မျက်နှာပေးသည်ကို အခွင့်အရးယူ၍ ခင်ကြည်ကြည် ၏ အိမ်ဦးခန်းတွင် ထိုင်ကာ အမြိုင့်သား ရည်းစားစကား ပြောခဲ့သည်။ လူကြီးများချင်း သဘောတူကြ သဖြင့် အနေချောင်သည်။ အပြောချောင်သည်။
ထိုအခွင့်အရေးများသည် ကျွန်တော်တစ်ယောက်အဖို့ အဟာဒုတ်မဲ ပေါက်သည့်နှယ်၊ ခင်ကြည်ကြည် ၏ ယုယမှု ကို အပြည်အဝ ခံစားခဲ့ရသည်။ သို့သော် ဖျာပုံသို့ ရောက်သောအခါ ခင်ကြည်ကြည်၏ သဏ္ဍန်သည် ကျွန်တော် ရင်တွင် မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရပြန်သည်။
သန်းသန်းကား ကျွန်ျတော် ရည်းစားတွေ မှိုလိုပေါက်ထားသည်ကို မသိရှာ။ ရန်ကုန် မှ ကျောင်းပိတ် ပြန်လာပြီး ကတည်က ကျွန်တော် တစ်ယောက် အချိန်ရခိုက် လျှောက်ပြန်သံပေးလုပ်ရင်း လစ်လျှင် လစ်သလို စာတက်ပေး သည်။ ချစ်စကား ပြောသည်။ အချိန်ကြာမြင့်လာသောအခါ သန်းသန်းသည် ကျွန်တော်အား အထက် ကဖော်ပြသကဲ့သို့ ချစ်သူဘဝသို့ ရောက်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော် သည် သန်းသန်းကို တကယ်လည်း ချစ်သည်။
ကျွန်တော့် ရည်းစားတွေထဲ ၌ သန်းသန်းကို အချစ်ဆုံး။
အို..... အများကြီး၊ တကယ်ကို အများကြီး။
ချစ်သူဘဝ ချစ်သူမဖြစ်တဖြစ်ဘဝ၊ ချစ်သူဖြစ်မည့် ဖြစ်ဆဲဘဝ စသည့် မိန်းကလေးပေါင်းများစွာ၏ မောင်မောင်၊ အနှီမောင်မောင် သည် ယခုတော့လည်း ဘဝပေး အကြောင်းများကြောင့် ပြောင်းလဲခဲ့သည်ဟု ဆိုရမည်လား၊ သို့တည်းမဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်၏ ရိုက်ပုတ်မှု ကြောင့် ပင်လား၊စည်း နှင့်ကမ်းနှင့် နေထိုင်ရသည် ဖြစ်လေရာ အရပ်သား တစ်ယောက်ကဲ့သို့ အနေအစား၊ မချောင်လှပါ။ အထက်မှ ပေးအပ်သော အမိန့် ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ အုပ်ချုပ်မှုအောက် တွင် သွားလာလှုပ်ရှားရသည်။
တစ်နေ့တာ၏ အချိန်များ အားလုံးသည် စစ်သားတစ်ယောက် အဖို့ အားလပ်သည်ဟူ၍ လုံးဝမရှိနိုင်ပေ။ မနက် အိပ်ရာထသည်မှသည် အိပ်ရာဝင်သည် အထိ ဇယားချ လုပ်ငန်းများဖြင့် နေထိုင်ရသည့် လူတန်းစား တစ်ရပ်ဟု ဆိုက မမှားနိုင်ဟု ထင်ပါသည်။
မိခင်ကြီးသည် ကျွန်တော်လို သားမိုက်တစ်ယောက်အား နည်းလမ်း များစွာဖြင့် ဘဝ၏ ပန်းဝင်ရေးကို ကြိုးစားပေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးကို ချစ်တက်သော စိတ်ဓါတ်ကို သွင်းပေးသည်။ နယ်ချဲ့ ဆန့်ကျင်ရေး လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွင် ပါဝင်သည်ကို အားပေးမြှောက်ခဲ့သည်။ သေသေချာချာ စဉ်းစား ကြည့်လျှင် ကျွန်တော်အား ဖယောင်းကဲ့သို့ ပုံသွင်းပေးသူမှာ လက်ဦးမည်ထိုက်စွာဆိုသည့် မိခင်ကြီးဖြစ်၍ ဒုတိယ သွန်သင်ဆုံးမသူများမှာမူကား မြို့မ အမျိုးသား အထက်တန်းကျောင်းမှ ဆရာ ဆရာမများနှင့် ပေါင်းဟောင်း သူငယ်ခင်းကောင်းများကြောင့် ဟုသာ ဆိုနိုင်ပါသည်။ မှတ်မိပါသေးသည်။
သင်္ဘောထွက်အံ့ဆဲဆဲ မာဂရက်ထံမှ လက်ဆောင်ပစ္စည်း တစ်ထုပ် ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မိခင်နှင့် အစ်ကို ဖြစ်သူရှေ့တွင် ဖွင့်၍ မကြည့်ရဲသဖြင့် တော်ရာချောင်တွင် ဖွင့်ကြည့်ခဲ့ရသည်။ အဆက်ဖြတ်၍ အဖက်မလုပ်တော့ဟု စစ်ကြေညာ၍ ချစ်သူအဖြစ်မှ ပြတ်စဲခြင်းခံရသူ ကျွန်တော့်လက်ဝယ်တွင် လက်ဆောင် ပစ္စည်း များနှင့် ကျောင်းပြန်နေသည် ဆိုခြင်းကြောင့် အားပေးသော စာတစ်စောင်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တွင် အဟောင်း သည် အသစ်တစ်ဖန် ဖြစ်ခဲ့ပြန်ပြီး နှလုံးသားဒဏ်ရာက ခံစားလားရပြန်သည်။
လွန်လေပြီးသော အကြောင်းအရာသည် စဉ်းစားလေတိုင်း မဆုံးနိုင်သော မြွေကြီးလင်းမြွေပမာ အဟောင်း အဟောင်းတို့ ပျောက်ကွယ်ပျက်သုဉ်းခဲ့သလို အသစ်အသစ်တို့သည်လည်း မွေးဖွားသန့်စင် ခဲ့ကြသည့် အတိုင်း ကျွန်တော်အဖို့ တွင်လည်း အဟောင်းများ သေဆုံးခဲ့ပြီး အသစ်များ မွေးဖွားရာသို့ ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။
လူပွေမောင်မောင် ဘဝမှ နိုင်ငံရေးသမား သခင် မြလှိုင်၊ ထိုမှသည် ယခု စစ်သားမြလှိုင်အဖြစ် မွေးဖွား ပြန်ပေပြီ။
စစ်ထဲ ဝင်ရာက်ခြင်းအတွက် ကျွန်တော်ကို မိခင်ဖြစ်သူက တားမြစ်ခဲ့ခြင်း မရှိသလို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ကလည်း စိတ်အားထက်သန်စွာ ဝင်ရောက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည် စစ်သား တစ် ယောက်၏ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှု ကို လက်တွေ့ စစ်ထဲ ဝင်ကြည့်သောအခါ တွင်မှ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ခံစားခဲ့ရသူပီပီ ပထမအစ၌ အလွန် စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်း ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ အမှန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော် ပင်ကို ဗီဇစိတ်တွင် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးကိုချစ်သော စိတ်က လွှမ်းမိုးနေခြင်းကြောင့် ယင်းကဲ့သို့ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုများသည် လှုပ်ရှား ရုန်းကန်ရင်းမှ ပပျောက်သွားခဲ့လေသည်။
နုနယ်သော ကျွန်တော် နှလုံးသားတွင် ခံစားမှုကလေးများ ကပ်ငြိလျက် ရှိသည်။ စစ်ထွက်အံ့ဆဲဆဲ ကာလက မိမိချစ်သူ အား နှုတ်ဆက်ရန် အခွင့်အရေး မရခဲ့သဖြင့် လမ်းတစ်လျှောက်လုံး တနုံ့နုံ့ ခံစားခဲ့ရသည်ကို လည်းကောင်း၊ ချစ်သူ၏ ရှေ့မောင်တွင် ချစ်ခြင်း မေတ္တာသည်သာ ကိုးကွယ်ရာဟု ထင်မှတ်၍ ကလေးငယ်ပမာ အိမ်ထောင် တည်ဆောက်ရေးကို သွားရည်စာစားရန် ပူဆာသကဲ့သို့ လည်းကောင်း ပြန်လှန် စဉ်းစားကြည့်သော အခါ ရရာသော အဖြေကို ရှာမတွေ့ နိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့သည်မှ တစ်ပါး အခြား အဖြေအသစ်လည်း ပေါ်မလာခဲ့ပေ။ ကျွန်တော် ၏ အတွေးမျှင်သည် ဂျာအေး သူ့ အမေရိုက်သော တေးသွားကဲ့သို့ အဆုံးအစ ရှာမရသည့် အခြေအနေ တွင် ရပ်လျက်ရှိနေပါသည်။
''ဟေ့... မြလှိုင်၊ တပ်ခွဲမှူး ခေါ်နေတယ်''
ကျွန်တော် သည် တပ်ခွဲမှူး၏ ရှေ့တွင် ခြေစုံရပ်၍ အလေးပြုလိုက်သည်။ တပ်ခွဲမှူးက ကျွန်တော် အား ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်ပြီး သက်သာနေစေသည်။
ထို့နောက်တွင်မူ ကျွန်တော်တို့ တပ်ထဲတွင် ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိနှင့် တပ်ထဲ တွင် နေထိုင်ရသည့် ဆင်းရဲပင်ပန်းမှုများနှင့် တိုက်ပွဲတွင် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ ပါဝင်တိုက်ခိုက် လာခဲ့သည့် အတွက် ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူကြောင်းစသည် များကို ပြောကြားပါသည်။ ကျွန်တော်သည် တပ်ခွဲမှူး၏ ဖော်ရွေမှု၊ အရေးတယူ စကားပြောဆိုမှုများအတွက် အံ့သြခြင်း ဖြစ်မိသည်။ ယင်းသို့ အံ့သြခြင်း ဖြစ် သည်မှာလည်း ကျွန်တော် တို့မြို့မှ တပ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ကြသူ အားလုံးလိုလိုပင် ဖြစ်ပါသည်။ တပ်ခွဲမှူး သည် ကျွန်တော်တို့ ဖျာပုံမြို့နယ် မှ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေါ် တပ်မတော်သို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြသူများ အားလုံးကို တစ်ယောက်စီ သီးခြား ခေါ်ယူတွေ့ဆုံကြောင်း သိခဲ့ရလေသည်။
''မြလှိုင် မင်းကို ဗိုလ်စက်ရောင်က ဘာတွေ ပြောလဲကွ''
''တပ်ထဲမှာ ဆက်ဆက်လုပ်မလား မလုပ်ဘူလားတဲ့ကွ၊ နောက်ပြီး တိုက်ပွဲမှာ သူနဲ့အတူ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ အသက်စွန့် ဆောက်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက် လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်ကွာ၊ ဒါပါပဲ''
''အေး ... ငါတို့ကိုလဲ မင်းကို အခုမေးသလိုပဲ မေးတယ်''
''ဒါ ဘာသဘော လဲကွ တပ်ထဲဝင်ချင်လို့ပဲ ဝင်လာခဲ့ပြီးပဲဟာ အထူးအဆန်းလုပ်ပြီးများ ထပ်မေးရသေး တယ် ဟား ဟား''
ကျွန်တော်တို့ ဖျာပုံသား ရဲဘော်များဝိုင်းဖွဲ့၍ ဗိုလ်မှူး ဗိုလ်စက်ရောင် ပြောကြားသည့် စကားများ ကို ဖောက်သည်ချရင်း စကားလက်ဆုံကျနေကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ လူသိုက်ထဲတွင် ကျွန်တော်သည် အသက်ငယ် ဆုံးဖြစ်၍ ကျန်ရဲဘော်များမှာ ကျွန်တော်ထက် အသက်အားဖြင့် လည်းကောင်း၊ အတွေ့အကြုံ အားဖြင့် လည်းကောင်း ကြီးမားရင့်ကျက်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။
ထိုအချိန်တွင် ... စစ်ခရာသံသည် ပျံလွင့်လာသည်...။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး စုဝေးထိုင်နေရာမှ အပြေးအလွှား တန်းစီ ကြသည်။ သို့သော် ယခုအခါ တန်းစီရာတွင် အခါတိုင်းကဲ့ သို့ အလံချ တန်းဖြုတ်ရုံမျှ မဟုတ်ဘဲ တပ်ခွဲမှုး ဗိုလ်စက်ရောက်သည် စကား ပြောရန် ကျွန်တော် တို့ ရှေ့တည့်တည့်တွင် ရပ်လျက် ရှိနေသည်ကို တွေ့ကြရပါသည်။
''ငါတို့ရဲ့ စစ်သေနာပတိချုပ်ရဲ့ အမိန့်အရ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်ကို ယနေ့မှစ၍ ဖျက်သိမ်း လိုက်သည်၊ ရဲဘော်တို့ အနေနဲ့ ငါတို့နောက်ထပ် ဖွဲ့စည်းမဲ့ တပ်မတော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်လိုသူများ ရှိရင် မနက်ဖြန်ကစပြီး စာရင်း များ ပေးသွင်းကြစေလိုတယ်။ မဝင်လိုတဲ့ ရဲဘော်များအနေနဲ့ မိမိတို့သဘော အရ မဝင်ဘဲ နေနိုင်တယ်။ ရဲဘော်တို့အတွက် လိုအပ်မယ့် ခရီးစရိတ်နဲ့ ထောင့်ပံ့ကြေးများကို မနက် ဖြန်မှစပြီး ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်၊ ငါ့ပြောစကား များကြားကြရဲ့လား''
ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်ကြီးကား ဖျက်သိမ်း ခဲ့လေပြီတကား။
မမလေးကိုနော်ဗျ××× သည်မောင်ခိုးမယ်လို့ ×××× လူဆိုးတွေနဲ့ မောင်တိုင်ပင်××× အိုဗျာ မမလေး ကိုတဲ့××××
''ဟေ့လူ ခင်ဗျား သောက်ပါးစပါကြီး ပိတ်ထားစမ်းဗျာ၊ ဒီမှာ စိတ်ရှုပ်ရတဲ့အထဲ သူက တမှောင့်၊ ဟွန်း သောက်လိုက်ကန်းဆိုး မသိတဲ့ နေရာမှာ ခင်ဗျားဟာ နံပါတ် ၁ ပဲ''
''ဟိတ်ကောင် ကျေးဇူးကန်းစကား မပြောနဲ့၊မင်း မိန်းမရဖို့ ငါတို့ ခိုးပေးရမယ် ကောင်က၊ ဟေ- မင်း ဘာပြောချင် လဲ ပေးစမ်း ဆေးတစ်ရှူ''
ကျွန်တော်ည် သန်းသန်းကို ခိုယူရန် သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ကြသည့် ကိုအုန်းမောင်၊ အဘောက်၊ ရွှေအိဝင်းမောင်၊ သောင်းအိ၊ သက်ကြည်စသူများနှင့် တိုင်ပင်နေခြင်းဖြစ်ရာ ကိုသောင်အိသည် မည်သည့် အကြံများ မပေးသည့်ပြင် နောက်ပြောင်နေခြင်းဖြင့်သာ အနှောင်အယှက်ပေးလေ့ ရှိပါသည်။
အမှန်က သန်းသန်းကို ခိုးယူရန် သူငယ်ချင်း ကိုကျောဆိုသူအား တိုင်ပင် ခဲ့ရာတွင် ကိုကျော်သည် ကျွန်တော် အား မိန်းမခိုးရန် သဘောတူသဖြင့် တစ်ဘက်လှည့်ဖြင့် မိခင်ကြီးအား သတင်းပေးလိုက်ရာ မှ ကျွန်တော်အိမ်မှ အဝတ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုဖြင့် ဆင်းပြောလာခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မူခ အစီအစဉ် အတိုင်းဆိုလျှင် သန်းသန်း ကို ခို၍ ထွက်မပေးမီ အိပ်တွင် ငြိမ်ငြိမ်ကလေးနေပြီရသမျှ ငွေကြေးများကို အလစ်သုတ်ခဲ့ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုမူ ငွေရှာဖွေရေး အစီအစဉ်ကြီး ပျက်ခဲ့ရသည် သာမက ကျွန်တော်ပင်လျှင် အဝတ်အစား မပါ အိမ်မှ ဆင်းခဲ့ရလေသည်။
''ကိုင်း...ငွေ ဘယ်ကရမလဲ ''
ငါ့မှာ ငါးကျပ်တော့ ရှိတယ် သူငယ်ချင်း''
အကောက် သည် သူစုဆောင်း သိမ်းဆည်းထားသော ငွေငါးကျပ်ကို အိပ်ကပ် အတွင်းမှ ထုတ်ပေးလာသည်။ သက်ကြည် ၊ ရွှေအိဝင်းမောင်၊ ကိုအုန်းမောင် သုံယောက် စုဆောင်းလိုက် သောအခါ ခြောက်မူးတစ်ပဲ ရသည်။ ကျွန်တော်လက်ဝယ် အသပြာတစ်ဆယ်သုံးကျပ်ရှိသည်။ ဤငွေကလေးမျှဖြင့် မည်ကဲ့သို့ မိန်းမခိုးယူနိုင်မည်နည်း။
ကျွန်တော်အဖို့ ပွဲထဲက လူပြက်များ ပြောသကဲ့သို့ ထွက်ဟယ်ထွက်ဟယ်နှင့် ထွက်သာလာခဲ့ရတယ်ဟ ငါဘာကောင်ပါလိမ့် ဆိုသည်ကဲ့သို့ ကိုယ်ဘဝကို ကိုယ်တိုင် ရပ်တည်ခြင်း မရှိဘဲ၊ မိန်းမယူရန် ဆုံး ဖြတ်ခြင်းသည် ကိုယ့်ဒုက္ခ ကိုယရှာဖွေခြင်းသာ မည်ပေသည်။
''ဟေ့.... နောင်ခါလာ နောင်ခါဈေး၊ မင်းအမေက မင်းကို ကြာကြာပစ်ထားမှာ မဟုတ်ပါဘူးကွ၊ ခုတော့ စိတ်ဆိုးနေတုန်း ဆိုတော့ မင်းကို လက်မခံ ပဲ ထားမှာပေါ့ကွာ၊ ခုတော့ စိတ်ဆိုး နေတုန်း ဆိုတော့ မင်း ကိုလက်မခံ ပဲ ထားဦးမှာပါကွာ၊ ဟုတ်ဘူးကွာ၊ ဟုတ်ဘူလား သူငယ်ချင်းတို့ရာ''
အရွယ်အားဖြင့် ၁၈-၁၉ နှစ်ဝန်းကျင်မျှသာ ရှိသေးသည့် ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေသည် ရှေ့ရေး တပ်မတော်ထဲသို့ ဝင်ရောက် ကြစဉ်က အတူတကွ လက်တွဲ ဝင်လာကြသူများဖြစ်သည်။ ထို့အတူ တိုက်ပွဲတိုက်ရာ၌လည်း တပ်စိတ်တစ်စိတ်ထဲတွင် အသက်ပေး၍ တိုက်လာခဲ့ကြသော သေဖော်သေဘက် ရဲဘော်များလည်း ဖြစ်ပါသည်။
''သန်းသန်းကို ခိုးတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ၊ အခုလို ငွေကြေးမရှိဘဲ ရှေ့ အဖို့ဘယ်လိုနေလို့ ဘယ်လိုစားကြ မလဲ၊ နောက်ပြီး အိမ်ထောင်ပြုတယ် ဆိုတာ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားပြီးမှ လုပ်သင့်တယ်လို့ ငါ တော့ထင်တာပဲ၊ အေး... တစ်ခုတော့ရှိတယ်၊ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ယူကိုယူမှ ဖြစ်တော့မယ်'' ဆိုရင်တော့ တို့တတွေအနေနဲ့ ကူညီရမှာပေါ့လေ''
ကိုအုန်းမောင် စကားကြောင့် ကျွန်တော်အတန်ကြာမျှ စကားပြန် မပြောနိုင်ဘဲ စဉ်းစားကြည့်မိပါသည်။ ကျွန်တော်မိခင် သည် ကျွန်တော်အား သန်းသန်းနှင့် သဘောတူ၍ကား မဟုတ်ပေ။ ငွေကြေးဓနအရှိန် ဖြင့် ငါ့သားနှင့် မည်သူမျှ မတူမတန်ရာဟူသော သဘောမျိုးလည်း မဟုတ်ပေ။ စင်စစ် ကျွန်တော်အား တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေး လုပ်ကိုင်သည်ကို ကျေနပ်နှစ်သက်စွာ ခွင့်ပြုသလိုပင်၊ ပညာရှာမှီးရေး ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးနိုင်ရေး စသည် တို့ကိုလည်း မိမိစွမ်းအားဖြင့် မိမိကြိုးပမ်းစေလိုသော သဘော ရှိခြင်းသာ လျှင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ သန်းသန်း မိဘဘက်က ကြည့်ပြန်လျှင်လည်း ၎င်းတို့၏ တစ်ဦး တည်းသော သမီး ဖြစ် ရုံမက မိခင်ဖခင်တို့သည် သမီးဖြစ်သူအား အရိပ်ကြည့်လျက် ရင်အုပ်မကွာ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက် လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်၍ မိဘ၏ ဂုဏပုဒ်ကြောင့် သူဌေးသား ဆိုသည်မမျှ ဖြင့် ကျေနပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
သန်းသန်း ၏ ဖခင်သည် တစ်ပြားမှသည် တစ်ဆယ်တစ်ရာ တစ်ထောင် ကို မိမိဥာဏ်စွမ်းဖြင့် လုပ်ကိုင် ရှာဖွေ ကြီးပွား လာသူ ဖြစ်လေသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် သမီးဖြစ်သူ ယူသော ခင်ပွန်ယောက်ျားတစ်ယောက် အနေဖြင့် လည်း ဇနီးမယားတစ်ဦး အပေါ် အစွမ်း အစရှိစွာ ရှာဖွေကျွေးမွေးနိုင်သောသူကိုသာ သဘောတူကြပေလိမ့်မည်။ ကျွန်တော် ကဲ့သို့ လူပေါ်ကြော့ အလုပ်အကိုင်မရှိသူ တစ်ဦးကိုမူ မည်သည့်နည်းနှင့် မျှ သဘောတူကြလိမ့်မည် မဟုတ်သည် မှာ သေချာလှပါသည်။
''ကျွန်တော် နှစ်ခါ ကတိမပျက်ဘူးဗျ''
"ဒီလိုဆိုရင် ရက်တော့ရွှေ့လိုက်ဦးကွာ၊ နောက်ပြီး သန်းသန်းကို မင်းအခြေအနေအာလုံးကို အမေကြူကြီး ကတစ်ဆင့်ပြောပြ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ခါတိုင်းတွေ့နေကျ သူ့အဒေါ်အိမ်မှာ ချိန်ပြီးတွေ့ပေါ့၊ ငါလည်း လိုက်ခဲ့ မယ်။ ငါတော့ စဉ်းစဉ်းစားစား လုပ်စေချင်တယ်ကွာ၊ ငါအကြံပေးတာ မင်းတို့နှစ်ယောက်အတွက်ပါပဲ"
ကိုအုန်းမောင်၏ အကြံပေးချက်အရ သန်းသန်းကို ထပ်၍ တွေ့ဆုံပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောရန် ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါသည်။
"ပြောနေကြာတယ်ကွာ၊ မင်းအခု စာရေးပေးလိုက်၊ ငါ သွားပေးပေးမယ်၊ နောက်ပြီး အချိန်ရရင် မြန်မြန် တွေ့ဖို့ ငါပြန်လာခဲ့မယ်"
"ကိုအုန်းမောင်ပြောတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ၊ ခင်ဗျား သူ့အိမ်သါားလို့ ဖြစ်ပါ့မလားဗျ၊ အဘိုးကြီးက ဒေါသတက ကြီးပါဘိ နဲ့ တော်ကြာရိပ်မိပြီး ပိုကျပ်သွားဦးမှာလည်း စိုးရိမ်တယ်လေ နော"
"ဟေ့-မြလှိုင်၊ ဒါ မင်းအလုပ် မဟုတ်ပါဘူးကွာ၊ တို့များအနေနဲ့ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နှင့် လုပ်လာခဲ့ကြမှာ ပါ၊ မင်း စာရေးမှာသာ ရေးစမ်းပါ"
ကျွန်တော်သည် ကိုအုန်းမောင်နှင့် သူငယ်ချင်းများ၏ တိုက်တွန်းချက်အရ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ထိုင်၍ သန်းသန်း ထံ အကျိုးအကြောင်း စာရေး၍ ချိန်းလိုက်ပါသည်။ သို့သော် သူငယ်ချင်းများ၏ အစီအစဉ်ကို သိလိုလှသဖြင့် မည်သို့မည်ပုံ ဆောင်ရွက်ကြမည်ကို မေးကြည့်မိပါသည်။
"ခင်ဗျားတို့ အစီအစဉ်ကလေးတွေလဲ လင်းခဲ့ကြပါဦး၊ ဆ၇ာတို့ရယ်"
"ဒီလိုကွာ အကောက်စက်ဘီးကို အခုပဲ သွားယူပြီး အပ်နဲ့ ဖောက်မယ်စပုတ်တိုင် ၂ချောင်းလောက် ချိုး မယ်၊ နောက်ပြီး ဦးစစ်ရှိန်ကြီးဆီ ယူသွားပြီး ပြင်မယ်၊ အဘိုးကြီး စက်ဘီးကို ဂရုစိုက်ပြင်နေတုန်း သန်းသန်းကို စာပေးခဲ့မှာပေါ့ကွ၊ ဟီး-ဟီး မကောင်းဘူးလား"
"ကောင်းပါ့ဗျာ၊ အလွန်ကောင်းပေါ့၊ မြလှိုင် တစ်ယောက် မိန်းမခိုးဖို့အရေး ကြားထဲက ငါ့စက်ဘီး စပုတ်တိုင် ချိုး၊ ဘီးကိုအပ်နဲ့ဖောက်ရမယ်တဲ့၊ ဟင်း- သေခြင်းဆိုးတွေ ရှေ့လျှောက် ဘယ်အထိ ကောင်းကျိုးပေးကြဦး မယ်မသိဘူးဟေ့"
"ဒီအဘိုးကြီးတွေ့နဲ့ မချောင်လို့ မပေးဖြစ်ရင်ကောဗျာ"
"ဒီမယ် မြလှိုင်၊ ငါ့ကိုယ်ဖျောက်ပြီး မင်းအဆက် ချေးယိုနေတုန်း ချေးတွင်းပေါက် ခေါင်းလျှိုပြီး ငါသွားပေး ပေးမယ်"
ကိုသောင်းအိ သည် စကားကောင်းပြောနေသည့်ကြားမှ အသော ဖောက်လာတော့သည်။ သို့သော် ယနေ့ အချိန်မီ၊ သန်းသန်းထံသို့ သွားရောက်ရန် အရေးကြီးသဖြင့် ကိုအုန်းမောင်တို့ အကြံအတိုင်း လိုက်လျော လိုက်ပါ သည်။ မကြာမီ အကောက်၏ စက်ဘီးအကောင်းမှ ဘီးကို အပ်နှင့်ဖောက်၍ စပုတ်တိုင်နှစ်ချောင်း ချိုးကာ တွန်းယူ သွားသည်ကို ကြည့်ရင်း သက်ပြင်းရှည်ကြီးကို မှုတ်ထုတ်လိုက်မိပါသည်။
ကျွန်တော်သည် ကိုအုန်းမောင်တို့ လူသိုက် ပြန်လာမည့်လမ်းသို့ လည်တဆန့်ဆန့်ဖြင့် မျှောနေမိသည်။ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်၌ အခန်းလွတ်ကြီး ထိုင်နေရသည်မို့ လက်ဖက်ရည်ကို ဟန်မပျက် မှာယူသောက် နေ လိုက်သည်။
"သြော်... ရွှေသူဌေးသားလေး ဘာအကြံအစည် မတော်တရော်တွေ လုပ်နေပြန်ပြီလဲရှင်၊ စောစောက ကျိတ်ကျိတ် ကျိတ်ကျိတ် လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကြီး ပြီးသွားကြပြီလား၊ ဘယ်တော့ ဘယ်သူ့ကို လျော်ကြေးပေးရ ဦးမှာလဲ ရှင် ရယ်"
လက်ဖက်ရည် ဆိုင်ရှင် အမိုး၏မိန်းမ ဒေါ်အာပြဲကြီးသည် ကျွန်တော့်အား မည်သည့်နေရာမှ ချောင်းမြောင်း ကြည့်နေသည် မသိ၊ လူရှင်း၍ စားပွဲတွင် တစ်ယောက်တည်း ရှိနေသော ကျွန်တော်အနီးသို့ ချဉ်းကပ်ကာ အထက်ပါ မင်္ဂလာစကားကို ဆိုပါတော့သည်။
"ဘာအကြံအစည်မှ မရှိပါဘူးဗျာ့၊ စုပြီး ထမင်းချက်စားမလို့ ဈေးဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံလိုက်စုနေကြတာပါ၊ ဒေါ် စပ်စုကြီးရယ် ဟင်း....ဟင်း"
"ဒီမယ် ကိုယ်တောချော၊ မိသိန်းခင် ကို ဒါမျိုးလှိမ့်လို့ မရဘူး၊ ဟောဒီပါးစပ်ထဲက အံတွေတိုနေပြီ သိလား၊ နင်တို့ မိန်းမ ခိုးရအောင် တိုင်ပင်နေကြတာ ငါမသိဘူး မှတ်နေလား၊ ဘယ်သူ့သမီးဆိုတာ ပြောလိုက်ရဦး မလား ဟဲ ဟဲ"
"ကဲ... တော်... တော်ပါတော့ဗျာ"
ကျွန်တော်သည် မသိန်းခင် ညွှန်ပြရာသို့ ကြည့်လိုက်သည်။ အကောက်ကိုအုန်းမောင်၊ သက်ကြည်တို့ သုံးယောက် စောစောက သွားခဲ့စဉ်က ကဲ့သို့ စက်ဘီးကို ပြန်တွန်းလာခဲ့ကြသည်ကို တွေ့လိုက်ရပါသည်။ ကျွန်တော့် ရင်များသည် တဒ်ိတ်ဒိတ် ခုန်နေသည်။ ကိုအုန်းမောင်တို့ လူသိုက်ကို ကျော်၍ နောက်မှ မည်သူ ပါလာဦးမည်နည်း ဟု လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။
Posted by SHWE ZIN U at 10:39 AM